यी १५ हाउभाउ, जसले तपाईंलाई जीन्दगीभर असफल बनाउन सक्छ !
हरेक मानिसको आ-आफ्नै बडी ल्याङ्ग्वेज अर्थात शारीरीक भाषा हुन्छ । मानिसले जति नै राम्रो बोलोस्, उसको व्यवहार जतिनै उत्कृष्ट होस्, तर हाउभाउ र बडी ल्याङ्ग्वेजमा खोट छ भने सामनेवाला व्यक्तिमा ऊ प्रति नकारात्मक प्रभाव नै बढी पर्छ ।
हामी जे बोलिरहेका हुन्छौं, हाम्रो बडी ल्याङ्वेज र हाउभाउले पनि त्यही व्यक्त गर्नुपर्छ । तपाईंले मुखबाट जतिनै राम्रो कुरा किन व्यक्त नगर्नुस्, त्यसमा आँखा र तपाईंको हाउभाउले साथ दिएन भने त्यो सब बेकार हुन्छ ।
बडी ल्याङ्ग्वेजले तपाईंको सफलतामा पनि निकै ठूलो रोल खेल्ने गरेको छ । तपाईंसँग जति खुबी होस्, त्यो खुबीलाई बडी ल्याङ्ग्वेजमा देखाउन सक्नुभएन भने, तपाई कहिल्यै सफल हुन सक्नुहुन्न । तपाईंलाई कसैले विश्वास गर्नेवाला छैन ।
यसैक्रममा ‘ट्यालेन्ट स्मार्ट’ नाम एक अन्तराष्ट्रिय संस्थाले लाखौं असफल मानिसमाथि एउटा अनुसन्धान गर्यो । अनुसन्धानमा पत्ता लाग्यो बडी ल्याङ्ग्वेज र मानिसको व्यवहारसँग जोडिएका १५ गल्ति उसको असफलतामा सबैभन्दा बढी जिम्वेवार हुने रहेछन् ।
१) बेढंगी र भद्दा व्यवहार नदेखाउनुस्
बेढंगी र भद्दा अन्दाजलाई अनादर मानिन्छ । यसले तपाईं आफ्नो अघि रहेको मानिसको कुरामा कुनै मतलव नै गरिरहनुभएको छैन भन्ने अर्थ लाग्छ । यस्तो व्यवहारले तपाईंलाई जिन्दगीभर बेरोजगार बनाउन सक्छ । कुनै पनि बोस ढंग नभएको र बेमतलवी मानिसलाई काममा राख्न चाहँदैन । त्यसैले कसैले केही भन्दैछ भने त्यसलाई धेर्यतापूर्वक सुन्नुस् र अन्तिममा मात्रै प्रतिक्रिया जनाउनुस् । साथै आफू जिम्मेवार रहेको आभास पनि दिलाउनुस् ।
२) बढई-चढाई गर्ने स्वभाव
साना-साना कुरालाई पनि बढाईचढाई गर्ने कतिपयको स्वभाव हुन्छ । साना कुरालाई पनि ठूलो बनाएर धाक लगाउने बानीले कसैलाई फाइदा गर्दैन । यसले तपाईंको छवीलाई खराबमात्रै पार्छ । तपाईंले गरेको सही कुरामा पनि मानिसले विश्वास गर्न छोड्छन् । त्यसैले कुनै पनि कुरामा बढाईचढाई गरेर प्रस्तुत हुन छाड्नुस्, अनि हत्केला देखाएर कुरा पनि कहिल्यै नगर्नुस् ।
३. पटक-पटक घडी नहेर्नुस्
कुराकानी र कुनै कामका दौरान बारम्बार घडी हेर्नुलाई पनि राम्रो मानिन्न । यसले तपाईं त्यो कुरा अथवा कामप्रति इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्न । तपाईं कुरालाई छिट्टै सकाउन चाहनुहुन्छ, अथवा तपाईंको ध्यान अन्तै कतै छ भन्ने अर्थ लाग्छ ।
४. एकलकाटे नबन्नुस्
तपाईं धेरै राम्रो काम गर्नुहुन्छ, तर अन्य सहकर्मीहरुको वास्ता गर्नुहुन्न, एकलकाटे बन्नुहुन्छ भने यसलाई पनि राम्रो मानिन्न । त्यसैले आफूलाई ग्रुपमा सामेल गर्नुस् । उनीहरुको कुरा पनि सुनिदिनुस्, आफ्नो पनि सुनाउनुस् । जसले एकअर्काबीच सम्बन्ध सुमधुर बनाइराख्न मद्दत गर्छ । जुन सम्बन्ध तपाईंलाई जिन्दगीभर काम लाग्नसक्छ ।
५. हातखुट्टा क्रस गरेर नबस्नुस्
कतिपयको हात बाँधेर बस्ने स्वभाव हुन्छ, भने कोही खुट्टा क्रस गरेर बस्छन् । तर, शारीरीक भाषाका विशेषज्ञहरु यसलाई विलकुल गलत मान्छन् । तपाईं हातखुट्टा बाँधेर कसैसँग कुरा गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईं उसको कुरामा सिरियस हुनुहुन्न । केही कुरा लुकाइरहनुभएको छ भन्ने अर्थ लाग्छ ।
६. अनुहारको हाउभाउमा नियन्त्रण राख्नुस्
तपाईं जे बोल्दै हुनुहुन्छ, त्यो कुरा तपाईंको अनुहारमा देखिनुपर्छ । दु:खको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ भने अनुहार सिरियस हुनैपर्छ र खुसीमा एक्साइटेड पनि । अन्यथा तपाईंको कुरामा विश्वास नहुन सक्छ । त्यसैले फेसियल एक्सप्रेसनमा सधैँ ध्यान दिने गर्नुस् ।
७. आवश्यकता भन्दा बढी टाउको नहल्लाउनुस्
कुनै पनि कुरामा सहमति वा असहमति जनाउने सबैभन्दा सहज उपाय भनेकै टाउको हल्लाएर प्रतिक्रिया दिने हो । तर तपाईंले आवश्यकता भन्दा बढी नै टाउको हल्लाउन थाल्नुभयो भने राम्रो मानिँदैन । त्यसैले सकेसम्म आवाजबाटै प्रतिक्रिया जनाउने गर्नुस् । टाउको हल्लाउने बानी हटाएकै राम्रो ।
८. कपाल तथा पोशाक पटक-पटक नमिलाउनुस्
कुराकानीका क्रममा कहिल्लै पनि आफ्नो कपाल वा पोशाकलाई बारम्बार मिलाउने काम नगर्नुस् । यसले तपाईं आफ्नै कुरामा मात्रै बढी ध्यान दिँदै हुनुहुन्छ, अरुको कुरामा कुनै मतलव नै छैन भन्ने अर्थ लाग्छ ।
९. आँखामा आँखा जुधाएर कुरा गर्नुस्
आई कन्ट्याकलाई सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिन्छ । कुरा गर्दा आँखा नचाउनुभयो, कुरा गरिरहेको व्यक्तिको आँखामा आँखा जुधाउनु भएन भने तपाईंको विश्वसनीयतामा शंका उब्जिन्छ । आईकन्ट्याकले तपाईंको आत्मविश्वासलाई पनि झल्काउँछ । त्यसैले आँखामा आँखा जुधाएर कुरा गर्ने बानी बसाल्नुस् ।
१०. घुरेर नहेर्नुस्
आँखा जुधाएर कुरा गर्ने भन्दा घुरेर हेर्नुस् भन्न खोजिएको हैन । तपाईंले कुराकानीका क्रममा एकपटकमा ७ देखि १० सेकेण्डसम्म आँखा जुधाउनुस्, अनि परेला झिम्क्याएर फेरि हेर्नुस् । यसोगर्दा तपाईंले उसको कुराप्रति चासो दिइरहेको भन्ने संकेत मिल्छ र तपाईंको विश्वसनीयता पनि बढ्छ ।
११. आंखालाई दायाँबायाँ नघुमाउनुस्
कतिपय मानिस कुराकानीका क्रममा दायाँबायाँ तलमाथि घुमाइराख्छन् । यसरी आँखा नचाइराख्नु राम्रो मानिँदैन । आंखालाई पटक-पटक तलमाथि र दायाँबायाँ गर्ने बानी तुरुन्तै हटाउनुस् ।
१२. खुसी रहनुस्, अनुहारमा ताजापन होस्
कुनै पनि काम गर्दा फ्रेस रहने कोशिस गर्नुस् । तपाईंले झुम्म परेर काम गरिराख्नु भएको छ भने कसैले तपाईंको काममा विश्वास गर्दैनन् । त्यसैले सधैँ खुसी रहनुस् र फ्रेस भएर काम गर्नुस् ।
१३. हात मिलाउँदा ध्यान दिनुस्
तपाईंले हात मिलाउँदै गर्दा बेफिक्र अन्दाज देखाउनु भयो भने पहिलो इम्प्रेसन नै नकारात्तमक पर्न जान्छ । साथै लथ्रक पर्नुभयो भने तपाईंको आत्मविश्वासमा कमी भएको बुझिन्छ । त्यसैले हातमिलाउँदा स्फूर्ति र आत्मविश्वास देखाउनुस् ।
१४. मुठ्ठी बाँधेर नबस्नुस्
कुराकानीका क्रममा मुठ्ठी कसेर बस्नु पनि राम्रो मानिँदैन । यसो गर्दा हातखुट्टा बाँधेको बेलामा जस्तै संकेत जान्छ । तपाईं खुलेर कुरा गर्न चाहनुहुन्न भन्ने बुझिन्छ ।
१५. धेरै नजिक पनि नहुनोस्
कुराकानीका क्रममा धेरै नजिक पनि नजानुस् । अधिक निकटतालाई राम्रो मानिँदैन । त्यसैले आवश्यक दुरी कायम राख्नुस् ।
– एजेन्सीहरुको सहयोगमा
काठमाडौं, १३ माघ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले आफूलाई जुन समूहले अध्यक्ष दिन्छ त्यही समूह गएर...